Two Point Hospital uye Superbug Initiative Uyai kuLinux | Linux Vakapindwa muropa
Two Point Hospital uye Superbug Initiative Kuuya kuLinux
Chokwadi iwe unotoziva mutambo wechipatara manejimendi unodaidzwa Vaviri Point Hospital, tsime, ikozvino vagadziri vayo vagadzira iyo nyowani yekuvandudza, nyowani yemahara yemukati pack inonzi Superbug Kutanga izvo zvinosvika kune akasiyana mapuratifomu, akadai seLinux, Mac uye Windows. Nenzira iyi iwe unenge uine mikana yakawanda mukati mehutarisiro hwechipatara icho chakapa hwaro. Kana iwe wanga uchinge uchinge uchinge uchinge uchinetseka nemutambo wevhidhiyo, kunyange zvisingawanzo kuitika pamwe nekutamba, pano une zvakawanda.
Unogona kuiwana muchitoro che ValvesSteam, zvese zviri zviviri mutambo wepazasi Two Point Hospital, pamwe neyemahara kurodha zvirimo kubva kuSuperbug Initiative. Ichave iripo musi waApril 30, kana pasina chiitiko chisingafungidzirwe, saka mumazuva mashoma iwe unenge uine chakagadzirira kurodha pasi uye kuyedza kuwedzera maficha matsva kumutambo wevhidhiyo uyu wakaburitswa muna Nyamavhuvhu 2018 uye wakave nekushoropodzwa kwakanaka pakati pevatambi.
Nenzira, iwe unogona zvakare kuwana mutambo wevhidhiyo muHumble Store. Iyo mutengo, zvese paSteam neHumble zvinobva 39,99, saka haisi imwe yemitengo yakachipa, asi inobhadhara kuti ivo vanogadzira vari kuburitsa iyi mhando yemahara zvemukati nguva nenguva. Chimwe chinhu chinokosheswa ndechekuti kune mamwe matambudziko kana iwe ukashandisa Hardware ye NVIDIA yeLinux, sezvo inoshanda zvakanyanya nemakadhi emifananidzo kana AMD GPUs. Nekudaro, yeuka kuti iwe unogona kushandisa Steam Play uye kushandisa Proton ...
Kana iwe uchida mamwe mashoko Nezve Two Point Hospital, unogona kuwana iyo yepamutemo webhusaiti yepurojekiti mu www.topoopopnal.com uye kunyange kuwana tsamba yavo kuti vawane ruzivo rwakagadziridzwa pamusoro pekufamba kwevagadziri, sekuziva kuti pachave riini nhau dzemukati senge iyi Superbug Initiative yekuvandudza. Panguva ino hapana chimwezve chekutaura nezvacho, unogona kuona vhidhiyo yandasiya pamusoro pechinyorwa ichi neturera nezve ichi chiwedzero.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Two Point Hospital uye Superbug Initiative Kuuya kuLinux
Steam Play inowana mitsva miviri mitsva ne 4.2-3 uye 3.16-9
SUSE ichave ikambani huru yakazvimirira yeLinux